AFSOOMAALIGA OO QARKA U SAARAN IN UU KASUULO LUQADAHA AFRIKA
usheeg waraabow baa igu dhacaye waxaa loo tarjumey...
Maxaa keenay in dadka Soomaaliyeed ay afkoodii hooyo kadoor bidaan afaf qalaad? [Cibaar]
WAA IN LAYAREEYA HORMARINTA AFSOMAALIGA!
Waxaan filaya in laga doodi karo fikrada ah “Afsoomaliga maxaa loo yasayaa?”
Qofkii aanan garanayn afka Ingiriisiga waa jaahil
Arrintaasi ma dhabbaa? Inteese- in la’eg ayaa lagu gumaystaa?
.Sunta ku duugan Soomaaliya
.Macdanta ku duugan Soomaaliya
Qoraalkaaga oo aad Loo Fahmo Waa Muhiimadda Koowaad [A.Sheikh]
Qaamuuska maamaahyada Soomaaliyeed
DHAWRITAANKA XUQUUQDA QORAALKA
26 August. 2005
Midowga Yurub oo waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii Ogaadeenya.
Ciidammada Itoobiya oo lagu eedeeyay dagaal beeleed ka dhacay xadka Ogadenya iyo gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Yeman oo dalal carbeed ugu baaqay gacan siinta dawlada Soomaaliya.
Wasiirrada caafimaadka Afrika oo ku baaqay in qaaxada lala dagaallamo.
Iyo Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga.
DHEGEYSO RADIO XORIYO...
Guddoomiyaha kormeerayaasha Midowga Yurub u kormeerayay doorasho ku sheegtii Itoobiya Ana Gomes ayaa si wayn u dhalecaysay doorashadii itoobiya, waxayna sheegtay in qaabkii doorashada loo agaasimay uu ahaa mid aan fiicnayn. Waxay kaloo intaas ku dartay in la diiday in la baadho musuqmaasuqyo cadcad oo doorashada lagu sameeyay oo xisbiyada mucaaradku ay soo bandhigeen.
Kormeerayaasha Midowga Yurub waxay sheegeen in doorashadu ayna buuxinin shuruudaha ugu hooseeya ee doorashooyinka u yaalla, isla markaana ayna dhiirri gelin u noqon karin dimuqraadiyad ka hirgesha dalka Itoobiya.
Guddoomiyaha kormeerayaasha Midowga Yurub Ana Gomes waxay si gaar ah carrabka ugu dhufatay in doorasho ku sheegtii la sheegay in laga hirgeliyay Ogaadeenya 21 Agoosto ayna ahayn wax doorasho lagu sheegi karo. waxay sheegtay in agaasinkeedu uu aad u liitay, khaladaad aad u badana ay ku jireen, iyadoo waraaqaha doorashadana suuq madow lagu kala iibsanayay.
Waxay kaloo intaas ku dartay in dadku ayna ra'yigooda xor u ahayn, isla markaana ayna xataa waraaqaha doorashada waxa ku qoran akhriyi karin. Waxay sheegtay in waraaquhu ay afka amxaariga ku qornaayeen, dadka soomaalida ahna ayna aqoon u lahayn afkaas.
Arrintaas ayaa waxay keentay in xukuumadda Itoobiya ay dhaleecayn u soo jeediso kormeerayaasha Midowga Yurub.
Midowga Yurub ayaa isaguna dhinciisa difaacay guddoomiyaha kooxda kormeerayaasha ah ee u ilaalaynayay doorashada Itoobiya Ana Gomes oo warbaahinta xukuumiga ah ee Itoobiya ku eedeeyeen inay xisbiyada mucaaradka u xagliso.
Bayaan uu Midowga Yurub soo saaray ayuu sidoo kale ku difaacay xubin kale oo kormeerayaashiisa ka tirsan, kaasoo isagana si gaar ah loo dhalliilay.
Dhalliishan loo jeediyay kormeerayaasha Midowga Yurub waxaa lagu soo qoray wargayska afka xukuumadda ku hadla Ethiopian Herald iyo xarunta warbaahineed ee xukuumaddu leedahay, kuwaasoo kormeerayaasha Midowga Yurub ku eedeeyay inay xidhiidh dhaw la leeyihiin madaxda xisbiyada mucaaradka ah.
Ana Gomes, oo ka tirsan Baarlamaanka Yurub, ayaa si wayn u dhalliishay qaabkii doorashadu u dhacday intii ay hawlaha doorashadu socdeen oo dhan, halka xubinka kalana uu si wayn isugu dayay isu keenidda madaxda xisbiyada mucaaradka ah iyo kuwa xisbiga talada ku amar-ku-taagleeya ee EPRDF, si xal loogu helo cabashooyinkii musuqmaasuqa ku saabsanaa ee mucaaradka ka soo yeedhayay.
Midowga Yurub ayaa bayaankiisan ku sheegay inuu aad ula yaabay eedaymaha lagu soo qoray warbaahinta xukuumadda Itoobiya. Waxaa kaloo bayaankan lagu sheegay in eedaymahaas ayna waxba ka jirin, isla markaana ayna ahayn kuwa la aqbali karo.
Midowga Yurub oo hawlaha kormeerka doorashada ka billaabay dalka Itoobiya bishii Maarso, ayaa waxaa la filayaa inuu warbixin dhammaystiran ka soo saaro doorashada Itoobiya bisha Sebtember.
Dhinaca kale kormeerayaal caalami ah oo u warramay hay’adaha warbaahinta ayaa sheegay in doorasho ku sheegtii Ogaadeenya laga hirgeliyay 21 Agoosto ay ahayd mid si wayn loo musuqmaasuqay, isla markaana loogu talagalay inuu ku soo baxo oo kaliya xisbiga bah-wadaagta la ah EPRDF.
Dagaal beeleed ayaa muddooyinkii denbe ka dhacayay xadka u dhexeeya Ogaadeenya iyo gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya, kaasoo u dhexeeya beelo deegaankaasi wada-dega. Dagaalkaas ayaa hadda si cad loogu eedeeyay ciidammada gumaysiga Itoobiya ee deegaankaas ku sugan.
Ciidammada Itoobiya waxay matoorro beeraha lagu waraabin jiray ka qaadeen mid ka mid ah beelaha deegaankaas wax ka dega, isla markaana ay kaxaysteen dad deegaanka ka mid ah oo aan illaa iyo hadda la garanaynin meel ay ku sugan yihiin.
Ciidammada Itoobiya ee deegaankaas ka hawlgala ayaa si wayn faraha ugula jira dagaal beeleedka deegaankaas ka socda, arrintaasoo la sheegay inay sii hurinayso dagaalka beelaha iyo colaada u dhexaysa.
Madaxweynaha dalka Yeman Cali Cabdalla Saalax ayaa la sheegayaa inuu wado olole ballaadhan oo uu kaga dhaadhicinayo madax ka tirsan dalalka Carabta inay garab istaagaan dowlada ku meelgaadhka ah ee Soomaaliya.
Madaxweyne Saalax ayaa isku dayaya sidii uu dowlado ka mid ah Carabta uga dhaadhicin lahaa inay taageeraan dowlada Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Jowhar, wuxuuna xidhiidho la sameeyay boqorrada iyo madaxweynayaasha dalal laga carrabaabay Kuwait, Sacuudi Careebiya, Suuriya iyo Masar, kuwaasoo uu ka codsaday inay oggolaadaan booqasho uu madaxweyne C/llaahi Yuusuf dalalkooda ku tego.
Wararku waxay intaas ku darayaan in dalalkaas intooda badani ay oggolaadeen codsiga madaxweyne Cabdalla Saalax ee ku saabsan booqashada madaxwaeyne C/llaahi Yuusuf.
Wasiirrada caafimaadka ee dalalka Afrika ayaa kulan ku yeeshay dalka Musanbiig, si ay uga doodaan cudurka qaaxad ee sida wayn ugu faafsan qaaradda Afrika. Waxaa la filayaa in Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO uu ku dhawaaqo hirgelinta hawlgal caafimaad oo degdeg ah oo lagula tacaalo cudurka qaaxada.
Cudurka khatarta ah ee AIDS-ka ayaa door wayn ka qaata sii faafidda cudurka qaaxada, oo inta badan dadka ku dhaca marka ay ugu wax-soo-saar badan yihiin, isla markaana maalin walba dila dad ay tiradoodu dhan tahay 1500 oo qof oo ku dhaqan qaaradda Afrika.
Cudurka qaaxadu wuxuu ku sii badanayaa dalalka qaaradda afrika ku yaalla iyo qaar ka mid ah dalalka Yurubta Bari. Cudurka qaaxadu wuxuu Afrika ugu batay iyadoo dadka xanbaarsan fayraska HIV-gu ay aad u bateen iyo iyadoo waaxaha caafimaadku ayna si fiican u shaqaynin.
Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa doonaya inuu cudurka qaaxada ka dhigo arrimaha sida aadka ah looga hadlo.
DHEGEYSO RADIO XORIYO..
Faafin: Aug 26, 2005
10-jir ku niyeystay, 40-jirna ku guuleystay
C/laahi Warsame Afrax::::